AC Milan oo dooneysa inay Janaayo lasoo wareegto daafaca Chelsea Ashley Cole. - Caasimada Online
Home Warar AC Milan oo dooneysa inay Janaayo lasoo wareegto daafaca Chelsea Ashley Cole.
AC Milan oo dooneysa inay Janaayo lasoo wareegto daafaca Chelsea Ashley Cole.
AC Milan ayaa isku diyaarineysa inay Chelsea ka dhaadhiciso inay kala wareegto bisha Janaayo daafaca bidix ee xulka England Ashley Cole.
31 jirkaan ayuu xagaaga ka dhacayaa qandaraaskiisa galbeedka London waxaana lasoo werinayaa in kooxda heysata Horyaalka Yurub ay dooneyso in daaficii hore ee Arsenal ay usoo bandhigto hal sano oo qandaraas kordhin ah, taasoo laga yaabo inuu Cole ka maago.
Milan ayaa si heer xun ku bilaabatay Horyaalka Italian Serie A, waxayna baahi u qabtaa daafac bidixeed iyadoo dooneysa inay horaanta Janaayo keensato Cole, kaasoo xor noqonaaya June-ta soo aadan.
19 jirka Mattia De Sciglio, ayaa inta badan loo dooranaayey daafaca bidix, tiiyoo tababare Massimiliano Allegri uu door bido kulamada Champions League Luca Antonini.
Cole ayaa Chelsea lix sano ka hor uga soo biiray kooxda ay xafiiltamaan ee Gunners, laakin xidiga daacada u ah kooxda Stamford Bridge oo xulkiisa u safanaaya kulankiisii 99aad ciyaarta San Marino ee Jimcada ayaa lasoo werinayaa inuusan hagaagsaneyn sii joogitaankiisa Blues.